बनाउन एक सामाजिक नेटवर्क
आफ्नो सिर्जना सामाजिक नेटवर्क — यो कार्य सबैका लागि छैन । तर यदि परियोजना सफल हुन्छ, त तपाईं हुनेछ एक धेरै आय । तपाईं काम सुरु गर्नुअघि यो दिशा मा, तपाईं आवश्यक व्यावहारिक मूल्याङकन गर्नु आफ्नो बल.
वास्तवमा, आधुनिक सामाजिक नेटवर्क धेरै शक्तिशाली छन् परियोजनाहरू । तिनीहरूलाई यो लगभग असम्भव छ, प्रतिस्पर्धा गर्न रूपमा, वास्तवमा, र खोज इन्जिन छ । यसबाहेक, यो सामाजिक नेटवर्क को लागि एक लामो समय को ठूलो प्रतियोगिता मा एक खोज इन्जिन छ । तथापि, तपाईं गर्न सक्छन् आफ्नो सिर्जना परियोजना मा एक विशेष आला. आजकल त्यहाँ छन्, सामाजिक मीडिया सिर्जना लागि सबै प्रयोगकर्ता । तर त्यहाँ केही परियोजनाहरु भनेर एकजुट गतिविधिलाई को एक निश्चित समूह को मान्छे । उदाहरणका लागि, तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ सिर्जना गर्न एक सामाजिक नेटवर्क को वा उत्सुक यात्री, माझिहरु र शिकारी छ ।
एउटै विषयको राम्रो हुन सक्छ बनाउन पोर्टल वा एक राम्रो वेबसाइट छ । प्लस, त्यहाँ छन् धेरै फोरम समर्पित यी विषयहरू । तर तिनीहरूले दिन सक्दैन भन्ने जानकारी प्रदान गर्दछ एक सामाजिक नेटवर्क, मल्टिमिडिया उत्पादनहरु र गुणवत्ता को संचार. सामाजिक नेटवर्क को लागि निर्माण गरिएको प्रयोगकर्ता कुराकानी गर्न । त्यसैले तपाईं गर्न सक्छन् सिर्जना गर्न स्वतन्त्र महसुस, एक परियोजना मा कुनै पनि स्वतन्त्र वा सानो प्रतिस्पर्धी आला.
मुख्य कुरा सुनिश्चित गर्न, जहाँसम्म यो विषय माग गरेको छ ।
धेरै डराउँछन् को काम संग कोड
तर बढाउनु निकै आवश्यक छैन. अब तपाईं पाउन सक्छन् तयार-बनाएको टेम्पलेट, सामाजिक सञ्जाल, पर्याप्त तिनीहरूलाई को समाप्त गर्न, केही ज्ञान भएको को क्षेत्र मा वेब डिजाइन र कार्यक्रम. सिर्जना एक वेब स्टूडियो र सामाजिक सञ्जाल, को पाठ्यक्रम, लागत एकदम अधिक छ । टेम्पलेट सामाजिक नेटवर्क प्रदान लागि एक राम्रो मौका हेरफेर गरेको छ । संख्या यस्तो टेम्प्लेट समावेश हुन सक्छ प्रोटोटाइप डिजाइन, मा अवस्थित हाम्रो समय छ ।
हरेक सामाजिक नेटवर्क गर्न आवश्यक बढुवा । परियोजना को पदोन्नति पारित हुन सक्छ माध्यम अन्य सामाजिक मिडिया सम्बन्धित वेबसाइटहरु र मदत संग सान्दर्भिक विज्ञापन । सम्झना कि, तथापि, यो खाली को लागि यस्तो परियोजना बढाउन अत्यधिक अवांछनीय छ । यो ठीक त्यही अवस्था संग एक खाली मंच. इंगित छ के पहुँच गर्न प्रयोगकर्ता भने यो कुनै मूल्य छ? कुनै एक संकेत मा एक सामाजिक नेटवर्क छ जहाँ बिल्कुल केही रोचक छ ।
टाइप कम्तिमा प्रयोगकर्ता पहिले तपाईं सुरु आमूल कार्य । र यो हासिल गर्न सकिन्छ विभिन्न कार्यहरू छ । केही विशेषज्ञहरु छन्, कारोबार मा बजारहरु कहाँ बनाउन निम्न कार्य: प्रयोगकर्ता दर्ता पर्छ वेबसाइट मा, पूर्णतया पूरा सर्वेक्षण, जो पछि उहाँले भुक्तानी गरिनेछ केही पैसा ।
बस एक वेबमास्टर गर्न असम्भाव्य छ शून्य भर्न सामाजिक नेटवर्क मा. को पदोन्नति यस्तो परियोजना आवश्यकता धेरै लगानी छ । त्यसैले बनाउन अघि तपाईं आफ्नो सामाजिक नेटवर्क, यो तयार गर्न आवश्यक छ, एक व्यापार योजना ।
अब कुरा गरौं बारे विशेष बनाउन कसरी एक सामाजिक नेटवर्क आफैलाई संग र केही उपकरण मदत
← एक्लो पुरुष - एक्लो केटा - एक्लो मान्छे (अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका)
अनलाइन च्याट बालिका →